Disk Image Turu. Clone Dhiraivha & Dhisiki. Disk Kopa Software.
DataNumen Disk Image chishandiso chine simba chekunamatira uye kudzorera disks kana dhiraivha. Inogona kugadzira uye kudzoreredza diski mufananidzo kana kutyaira mufananidzo byte. Inobatsira pakuchengetedza data & kupora, dhisiki / dhiraivha kopi & kuumbiridza, uye forensic.
4.90 / 5 (kubva 1,626 mavhoti)
Sei DataNumen Disk Image?
Disk Image yakapfuura mamwe matatu mapurogiramu ehunyanzvi akatadza kugadzira iyo ISO system mufananidzo - iyi yakashanda zvakakwana. Kunyange zvisingakwanise kuva
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen Disk Image v2.2
Tsigira ese marudzi emadhisiki uye anotyaira.
Tsigiro kudzoreredza dhata remufananidzo kudzokera kumatyaira.
Tsigiro yekukwirisa dhata kubva kune yakashata midhiya.
Tsigiro kutsiva zvikamu zvakakanganisika nedata rakatsanangurwa.
Tsigiro yekunamatira akawanda ma disks uye anotyaira mune batch.
Yakanakisa kushandiswa seyeyepi yekombuta forensic chishandiso uye zvemagetsi kuwanikwa (kana e-kuwanikwa, eDiscovery) chishandiso.
kushandisa DataNumen Disk Image Kugadzira Mifananidzo yeDhivha uye Disks
ne DataNumen Disk Image, iwe unogona kugadzira mifananidzo yekutyaira uye disks, nekuda kwakasiyana siyana, sekuchengetedza, kudzorera, forensics uye kudzoreredza data.
Cherechedza: Usati wagadzira dhiraivha kana dhisiki mifananidzo ne DataNumen Disk Image, ndapota vhara chero mamwe mashandisirwo.
Sarudza dhiraivha kana diski ine mufananidzo unogadzirwa:
Kana iwe wakabaya mu USB drive, asi usingakwanise kuiona mune iyo drive kana disk runyorwa. Unogona kudzvanya iyo
bhatani uye edza zvakare.
Tevere, gadza iro rinoburitsa mufananidzo zita refaira:
Iwe unogona kuisa zita refaira remufananidzo zvakananga kana kudzvanya iyo
bhatani rekutarisa uye sarudza iyo faira refaira.
bhatani, uye DataNumen Disk Image kuda start kuumbiridza iyo data mune yakatsanangurwa dhiraivha kana diski, wobva wazvichengetera mune inoburitsa mufananidzo faira. Kufambira mberi kubhawa
zvicharatidza kufambira mberi kwedombo.
Mushure mekuita kwedombo, kana iyo faira refaira rakagadzirwa zvinobudirira, iwe uchaona bhokisi remeseji rakadai.
Iye zvino unogona kushandisa diski mufananidzo kune zvakasiyana zvinangwa, kusanganisira:
Iishandise sekuchengetedza kweyekutanga dhiraivha kana diski.
Dzosera mufananidzo kumashure kune yekutanga dhiraivha kana diski, kana kune rakasiyana dhiraivha kana diski.
Tora data kubva pamufananidzo.
Ita forensic data kuongororwa pamufananidzo.
DataNumen Disk Image 2.2 inoburitswa muna Zvita 24, 2020
DataNumen Disk Image 2.0 inoburitswa munaNovember 9th, 2020
DataNumen Disk Image 1.9 inosunungurwa munaJune 14, 2020
DataNumen Disk Image 1.8 inoburitswa muna Kukadzi 1st, 2019
Natsiridza dhisiki kudzoreredza basa.
DataNumen Disk Image 1.6 yakaburitswa muna Zvita 12, 2016
DataNumen Disk Image 1.5 inoburitswa muna Ndira 18, 2015
Tsigiro yekudzoreredza iyo mifananidzo kuti ityaire kutyaira.
DataNumen Disk Image 1.1 inoburitswa muna Gumiguru 21st, 2014
Vandudza kumhanya kwedombo.
Wedzera ruzivo rwehuwandu hweiyo clone maitiro.
DataNumen Disk Image 1.0 yakaburitswa munaGunyana 9, 2014
Tsigira Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8 uye Server 2003/2008/2012.
DataNumen Backup ndicho chishandiso chakanakisa chekusimudzira uye kudzorera yako yakakosha data uye mafaera.